तिथि मेरो पत्रु »6महत्त्वपूर्ण कुराहरू पुरुष सेक्स समयमा बारे सोच्नुहोस्
मान्छे सेक्स को समयमा के विषयमा लाग्छ? यो शायद आदम र हव्वाको समय देखि महिला अप्ठेरो भएको छ भन्ने एक प्रश्न छ. सयौं पारित गरेको छ, तर अझै पनि केही महिलाहरु निर्धक्क तिनीहरूले आफ्नो साथी बाटक्स जब बारेमा सोच छ बिल्कुल के थाहा भनेर भन्न सकिन्छ. छलफल तल सेक्स को समयमा एक मानिसको मन कब्जा सक्छ कि केहि विचार पडताल.
म नपुगी पडना छैन आशा
सेक्स को समयमा प्रदर्शन चिन्ता बाटक्स जब लगभग हरेक मानिस अनुभव छ कुरा हो. केही लागि यो नियमित कुरा हो, अरूलाई लागि यो मात्र केही खास अवसरमा हुन्छ, जबकि यति लामो समय पछि सेक्स भएको जब, एक नयाँ साथी संग आरामदायक रही, आदि. प्रदर्शन चिन्ता अकाल स्खलन को इतिहास संग मानिसहरूलाई विशेष साधारण छ.
म यस जस्तै लज्जित गर्नुपर्छ, वा यो साँच्चै खराब थियो?
कराह कुनै पनि यौन क्रियाकलाप को एक अभिन्न भाग हो. मान्छे सधैं तिनीहरूले लज्जित बाटो बारेमा धेरै विश्वस्त छैनन्. सेक्स भएको हुँदा, तिनीहरूले अक्सर आफ्नो विलाप सही गर्न धेरै प्रयास बनाउन अन्त. तिनीहरूले खराब विलाप आफ्नो साथी बन्द सक्छ कि डर किनभने यो छ. त्यसैले, आफ्नो पति वा साथी सेक्स को समयमा विभिन्न अवसरमा फरक छ कराह छ भने, यो प्राकृतिक हुन सक्छ र सिर्फ आफ्नो moans सही गर्न बनाउने छ प्रयत्नहरू एक प्रभाव हुन सक्छ.
त्यो मनपर्छ? त्यसपछि किन त्यो यति मौन छ?
यो विचार पनि पुरुष सेक्स को समयमा छ कि प्रदर्शन चिन्ता प्रतिफल हो. प्रश्न अक्सर मानिसहरू हैरान पार्यो महिला जब बाटक्स मानिसहरूले भन्दा मुखर हुन जान्छन्; तथापि, अपवाद सधैं छन्.
यो साँचो तिनीहरूले आफ्नो साथी गरिरहेको छ के मन छैन किनकी चुप जाने जो धेरै महिलाहरु छन्. तथापि, कि संधै मामला छैन. तिनीहरूले शान्त रहन रुचि गर्छन किनकी केही प्रवास शान्त.
म फोहोर कुरा गर्नुपर्छ?
यो तिनीहरूलाई स्वाभाविक आउछ बस कतिपय मानिसहरू फोहोर कुरा, बस मा आफ्नो साथी बारी भनेर जो अरूलाई छन् जबकि. तथापि, आफ्नो साथी सेक्स को समयमा यस्ता शब्दहरू सुन्न रुचि कति सन्दर्भमा आफ्नो मन मा भ्रम अक्सर त्यहाँ; मानिसहरू एक नयाँ सम्बन्ध मा हुँदा यो ज्यादातर हुन्छ.
ओह! त्यो सिद्ध छ
यो अभिव्यक्ति बस स्तन वा butts सिद्ध जोडी देखेका छौं, जो मानिसहरू को लागि एक साधारण छ. उहाँले सबै भन्दा कदम आनन्द उठाइरहेका सुरू गर्दा एक मानिस त सोच्न सक्नुहुन्छ. मानिसको मन पनि बोले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ “हरे, सिद्ध छ” आफ्नो साथी द्वारा एक असाधारण सेक्सी कार्य साक्षी पछि.
अन्य महिलाहरु को बारे मा सोच
सबैभन्दा स्त्रीहरू स्तरका पाउनुहुनेछ, सेक्स भएको तर जब अक्सर मानिसहरू अन्य महिला सोच्न. सेक्स न्यास्रोलाग्दो हुँदा यो सामान्यतया वर्ष को लागि एक सम्बन्धमा रहन पछि हुन्छ. तपाईं आफ्नो साथी जब बाटक्स अन्य महिला सोच्न छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो सम्बन्ध मसला कदम चाल्न.
यी मानिस सेक्स को समयमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ कि केही कुरा थिए. उहाँले छ अवस्था निर्भर सेक्स भएको हुँदा एक मानिसको मनमा सक्ने अधिक अनौठो विचार हुन सक्दैन.
आधुनिक डेटिङ बारे कुरूप सत्य